ငြိမ်းစုစီ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း တင်သွင်း၊ အမှောင့် လုပ်ရပ်များ ဟန့်တားရန်၊ တလွဲ အ?? - Yangon Media Group
ငြိမ်းစုစီ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း တင်သွင်း၊ အမှောင့် လုပ်ရပ်များ ဟန့်တားရန်၊ တလွဲ အ??
ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းအား တင်သွင်းခြင်းအပေါ် အမှောင့်လုပ်ရပ်များအဖြစ် ဖျက်ဆီးမည့်အန္တရာယ်မှကာကွယ်ဟန့်တားရန်၊ တလွဲအသုံးပြုမည့်သူများကို အရေးယူမှုပြုရန်လိုအပ်သည့်အတွက် ထောက်ခံ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ပြောကြားလိုက်သည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ရက် ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီအတွင်းရေး မှူး ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏစိုးက ဥပဒေကြမ်းကို တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏစိုးက ” ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ၃၅၄ မှာဖော်ပြထားတဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ အရနိုင်ငံသားတိုင်းသည် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေး သို့မဟုတ် ပြည်သူတို့၏ကိုယ်ကျင့်တရား အကျိုးငှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေများနဲ့ ဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခြင်းကို အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး တင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ် နွယ်နွယ်အောင်က ”ငြိမ်းချမ်းစွာစု ဝေးခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်၍ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရာတွင် ဥပဒေ အကာအကွယ်က အခွင့်အရေးအ ဖြစ်အသုံးပြုပြီး နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားတို့၏အကျိုးစီးပွားကို သိလျက် ဖြင့် တမင်အမှောင့်လုပ်ရပ်များအ ဖြစ် နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးမည့်အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ဟန့်တားရန် လိုအပ်ခြင်း၊ ဥပဒေကိုတလွဲအသုံးပြု မည့်သူများကို ထိုက်သင့်သည့်အ ရေးယူမှုများ ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ် ခြင်းတို့ကြောင့် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ကြမ်းတင်သွင်းခြင်းကို လေးလေး နက်နက်ထောက်ခံအပ်ပါတယ်”ဟုပြောသည်။ အဆိုပါဥပဒေကြမ်းတွင် အပိုဒ်(၆)ပိုဒ်ပါရှိပြီး အပိုဒ်(၂)တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ(၄)ခြေဆင်း၌ ငြိမ်းချမ်းစွာစု ဝေးခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်လည်ခြင်း အခွင့်အရေးတို့ကို သုံးစွဲဆောင်ရွက်လိုသော နိုင်ငံသားများ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများသည် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ရပ်ရွာအေးချမ်း သာယာရေး သို့မဟုတ် ပြည်သူတို့၏ ကိုယ်ကျင့်တရားအကျိုးငှာ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်ဥပဒေများနှင့် မဆန့်ကျင်လျှင် မိမိသဘောဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်ရန်အလို့ငှာ အောက်ပါအချက်များပါရှိသော အသိပေးတင်ပြချက်ကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးထံ ယင်းသို့ဆောင်ရွက်မည့်နေ့မတိုင်မီ အနည်းဆုံး ၄၈နာရီကြိုတင်၍ စာ ဖြင့်ပေးပို့တင်ပြရမည်။ စီတန်းလှည့် လည်ရာတွင် ဖြတ်သန်းလိုသောမြို့ နယ်များရှိပါက သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးများထံ ၄၈နာရီကြိုတင် ၍အသိပေးတင်ပြချက် မိတ္တူပေးရမည်ဟု အစားထိုးရမည်ဖြစ်ကြောင်းပါရှိသည်။
ယင်းအချက်ကို လက်ရှိတည်ဆဲ ငြိမ်းစုစီဥပဒေဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေး သို့မဟုတ် ပြည်သူတို့၏ ကိုယ်ကျင့်တရားအကျိုးငှာ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်ဥပဒေများနှင့် မဆန့်ကျင်လျှင်ဆိုသည်မှာ အသစ်ဖြည့်စွက် တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သိရသည်။အပိုဒ်(၃)တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်း လှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မခွဲ(ဃ)ကို ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေး ခြင်းသို့မဟုတ် ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခြင်း ပြုလုပ်မည့်အစီအစဉ်၊ ခန့်မှန်းလူဦးရေ၊ ခန့်မှန်းကုန် ကျစရိတ်နှင့် ကုန်ကျခံမည့်ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းဟု အစားထိုးရမည်ဟုပါရှိသည်။ ယင်းအချက်ကို လက်ရှိတည် ဆဲငြိမ်းစုစီပုဒ်မနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်နှင့် ကုန်ကျခံမည့်ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းဆိုသောအချက်များမှာ အသစ် ဖြည့်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အပိုဒ်(၄)တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာစု ဝေးခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ အခန်း(၇) ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်များ ခေါင်းစဉ် အောက်တွင် ပုဒ်မ၁၈အဖြစ် မည်သူမဆို နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ပြည်သူတို့၏ကိုယ်ကျင့်တရားအကျိုးတို့ကို ပျက်ပြား စေရန်အကြံဖြင့်ဖြစ်စေ ထိုသို့ပျက် ပြားတန်ရာသော အခြေအနေဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိလျက်နှင့်ဖြစ်စေ ငွေသို့မဟုတ် ပစ္စည်းကိုသော်လည်း ကောင်း၊ အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုခုကိုသော်လည်းကောင်း သုံးစွဲ၍လူတစ်ဦးဦးအား ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည် ခြင်းပြုအောင်လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ သွေး ဆောင်ခြင်း၊ ဖြားယောင်းခြင်း သို့မဟုတ်တိုက်တွန်းခြင်းကိုပြုကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကိုသုံးနှစ်ထက်မပိုသောထောင် ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်သည်ဟု ဖြည့်စွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းပါရှိသည်။ ယင်းအချက်မှာ လက်ရှိငြိမ်း စုစည်းဥပဒေတွင်မပါဝင်ဘဲ အပိုဒ်တစ်ခုလုံးကို အသစ်ဖြည့်စွက်ထား ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါဥပဒေကြမ်းကို အမျိုးသားလွှတ်တော်က လက်ခံဆွေးနွေးရန်သဘောတူ၊ မတူဆန္ဒရယူရာ ကန့်ကွက်သူမရှိသဖြင့် လွှတ်တော်က လက်ခံဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီသို့လွှဲအပ် ကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာခဲ့သည်။ လက်ရှိငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည် ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကို ၂ဝ၁၆ခုနှစ်က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်(၃၈)ဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခင်၂ဝ၁၁ခုနှစ်တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ဥပဒေတစ်ရပ်လုံးကို ရုပ်သိမ်းကာ အသစ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သက်ငယ်မုဒိမ်း သေဒဏ်ပေးရေး ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပေးရန် ပြည်သူများတောင်းဆို၊ လက်မှတ်သုံးသိန်း မပြည့်
အငြင်းပွားဖွယ် ဖြစ်ခဲ့ရသော WLC-4 ပြိုင်ပွဲ တူးတူးနှင့် ဆိုရိုကင်တို့၏ ပွဲစဉ်မှ ဒိုင်လူကြီးမျာ
အသည်းကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုအများဆုံး ငါးနိုင်ငံတွင် မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်နေ၊ ရောဂါအတွက် ကာကွ
မိုင်းပျဉ်း-တောင်ကြီး ကားလမ်း၌ ခရီးသည်တင် ယာဉ်မောင်း အိပ်ငိုက်မှုကြောင့် ယာဉ်တစ်စီး ပေ ၁ဝဝ
ကမ်းနားလမ်း ညဈေးတွင် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာရောက်ရောင်းချခြင်း မရှိသည့် ဈေးသည်များထံမှ ရောင
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်ကော်မတီဝင် အဆင့်ဆင့်ရွေးကောက်ပွဲ ၂၀၁၈ မတ်လတွင် ကျင်းပမည် ဟုဆို
”ငယ်ကျွန် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ရူးခါနေအောင် ကြိုးစားထားပါတယ်” ရွှေမှုံရတီ